यी तीन राशिका सुन्दरी युवती पाउने पुरुष हुन्छन निकै सफल र भाग्यमानी ! जानीराख्नुहोस – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > यी तीन राशिका सुन्दरी युवती पाउने पुरुष हुन्छन निकै सफल र भाग्यमानी ! जानीराख्नुहोस
आफ्नो जीवनसाथीका बारेमा राम्रा वा नराम्रा बानि जान्ने सबै विवाहिताको चाहना हुन्छ ।कतिपय अवस्थामा उनीहरुको राम्रो ब्यवहार वा पक्ष बुझ्न नसक्दा कहिलेकाहि सम्बन्धहरु टुट्न पनि सक्छ । यस्तोमा आफ्नो पार्टनरको राम्रो बानिका बारेमा जानि राख्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा सम्बन्ध टुटेपछि पछुताउनुको विकल्प हुदैन । राशी अनुसार वृष, सिंह र तुला राशिका युवतीहरु प्रेम, विवाह र सम्बन्ध निभाउन निकै माहिर हुन्छन् ।
त्यसैले यि राशिका युवतीसंग विवाह गर्ने पुरुषहरु निकै भाग्यमानि मानिन्छन् ।
वृष राशी: यदि कोहि युवतीको राशी वृष हो भने ती युवतीहरु मनका दयालु हुन्छन् । उनीहरु कसैलाई चोट वा आघात पुर्याउन चाहादैनन् । मन सफा हुने भएकाले वृष राशीका युवती आफ्नो श्रीमान्लाई धोका दिदैनन् ।उनीहरु श्रीमानलाई खुसी राख्न जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । वृष राशीका युवती श्रीमानलाई धेरै माया गर्ने र भगवानमा आस्था राख्ने स्वभावका हुन्छन् ।
सिंह राशी: यदि कोहि युवतीको राशी सिंह हो भने ती युवतीहरु हरेक ढंगबाट उत्कृष्ट श्रीमती हुन्छन् । उनीहरु आफ्ना श्रीमानलाई कुनै कुरा पनि लुकाउँदैनन् । हुनत सिंह राशीका युवतीहरु ठूलो सपना देख्दछन् तर उक्त सपना पुर्ण गर्न वा सफल पार्न हरदम लागी पर्दछन् । उनीहरु जीवनमा पैसासंगै प्रतिष्ठा समेत कमाउने क्षमताका मानिन्छन् ।
तुला राशी: यदि कोहि युवतीको राशी तुला हो भने ती युवतीहरु आफ्ना श्रीमान् प्रति निकै बफादार हुन्छन् । तुला राशीका युवती आर्कषक मुहार र जिउडालका समेत हुन्छन् । तर उनीहरुको सुन्दरताका बिषयमा खासै ध्यान हुदैन । उनीहरु जोसंग प्रेम गर्छन् उहिँसंग जिवन बिताउने चाहाना राख्दछन् । यस्ता युवतीसंग विवाह हुने पुरुष निकै भाग्यमानि मानिन्छन् ।
७ बर्षे बालकको अदभुत प्रतिभा कला देखेर बिश्व चकित
एजेन्सी । जर्मनीका माइकल एकर भर्खर सात वर्षका भए। स्कुले शिक्षा शुरु भएको पनि छैन, उनको प्रतिभाका कारण सारा जर्मन चकित हुन थालेका छन्। कोलोन शहरमा जन्मिएका एकरले बनाएका चित्रकलाहरु यतिबेला चर्चामा आउन थालेका छन् भने कतिपयले त नयाँ पि’कासो भनी ना’मकरण समेत गर्न भ्या’एका छन्।
जर्मन मिडियाले भने उनलाई ‘प्रिस्कुल पिकासो’ नाम राखिदिएका छन्। उनले बनाएका चित्र यति चर्चित हुन थालेका छन् कि यो उमेरमै हजारौँ डलर कमाउन थालिसकेका छन्। उनका चित्र जर्मनीमा मात्र नभई फ्रान्स र अमेरिकामा समेत बिक्री हुन थालेका छन्।
माइकलको यो रुचिका बारेमा उनका बुबाले उनी जन्मेको केही वर्षभित्रै थाहा पाइसकेका थिए। चार वर्षको उमेरमा मा’इकललाई उनका बुबाले चि’त्रकलाका लागि आवश्यक सामग्री किनिदिएयता भने उनी कलाकार बन्ने छाँट नै देखाए। उनलाई सोध्ने हो भने त आफू फुटबल खेलको प्रसिद्ध खेलाडी बन्न रुचि रहेको बताउँछन् तर माइकलको काम गराई भने यतिबेलै हिट भइसकेकामा उनका बुबा करिम एकर म’ख्ख छन्। माइकलको म्या’नेजरका रुपमा क’रिमले काम गरिरहेका छन्। शुरुमा त स्वयं क’रिमलाई पनि उनले चि’त्रकला बनाएकोमा वि’श्वास लागेन।
क’रिम भन्छन्, ‘उसकी आमाले राम्रै चित्र बनाइछ भन्ने लागेको थियो तर पछि त यो उमेरमा छोराले बनाएको भनेर पत्याउनै गाह्रो भयो।’ अहिले नै इन्स्टाग्राममा माइकलका ४० हजार फलोअर छन्। प्रदर्शनीका लागि प’र्याप्त चित्र भइसकेकाले अब उनले जन्मघर कोलोनमै कला प्र’दर्शनी गर्नेछन् भने पेरिसमा अर्को महिना प्र’दर्शनी राख्ने क’रिमले बताएका छन्।
खुशीकाे खबरः रूपाकाे सहारा विनै मुम्बईमा यसरी स्वतन्त्र घुमिरहेछन् कृष्ण – तस्विरहरूमै हेर्नुहाेस्